Devanagari News‘सरकारी अस्पताल राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ नै भएनन्’ — Devanagari News
‘सरकारी अस्पताल राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञ नै भएनन्’
शासकहरूको अदूरदर्शिताले हामीले दुःख पाएका छौँ । जनतालाई फरक किसिमको जीवन दिन्छु, मौलिक हकको सम्मान गर्छु र पहिलेको भन्दा फरक किसिमको शासन व्यवस्थामा जनतालाई लैजान्छौं भनेको वर्षौं भयो ।
अझ भनौं यथास्थितिबाट अग्रगमनको बाटोमा लैजान्छौं भनेर राजनीति गरेर आएका मान्छेले ३०/३२ वर्ष शासन गरिसके । कुनै पनि देशको लागि ३० वर्ष भनेको केही गरेर देखाउन यथेष्ट समय हो । प्रजातन्त्र, गणतन्त्रहुँदै, लोकतन्त्रमा आइपुग्दा जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न खासै धेरै काम भएको देखिन्न ।
स्वास्थ्य प्रणाली किन रूपान्तरण भएन भनेर कुरा गर्दा शिक्षा जोडिन्छ । किन आज उपचारमा मानिसको खल्तीको धेरै पैसा जान्छ भनेर खोज्यो भने स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा सोच्नै नसकिने गरी महँगो छ । स्वास्थ्य शिक्षा महँगो भएकाले स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको बुझ्न सकिन्छ । किनकि पढ्दैखेरि घरखेत बेचेर पढ्ने अथवा अन्य ठाउँबाट कमाएको वा ऋण गरेको पैसा खर्च गर्ने भएपछि उसले कमाउने नै सोच्छ ।
पैसा खन्याएर पढेको मानिसको पैसा छाप्ने मेसिन बन्ने बाहेक अरू ध्येय हुँदैन । किनकि, उसलाई सरकारले दिएको तलबले मात्र पुग्दैन, क्लिनिक धाउनुपर्छ । एउटा क्लिनिक धाएर नपुगेर दुई चारवटा धाउनै पर्छ । ‘गुड प्राक्टिस्’ गरेर नपुगेर ‘माल प्राक्टिस्’ पनि गर्नुपर्छ । ‘माल प्राक्टिस्’ भनेको औषधि मात्र दिने होइन, चाहिंदै नचाहिने परीक्षण गराउने पनि हो । किनकि, त्यो कमिशनमा गएर जोडिन्छ ।
यी र यस्ता उपचारको शुल्क नितान्त चिकित्सकको शुल्कसँग मात्र जोडिन्न । डाक्टरले मेडिकल एजुकेशनमा गरेको खर्च उठाउनको लागि अनावश्यक औषधि लेख्छ, अनावश्यक परीक्षण गराउँछ र अनावश्यक अस्पताल बसाउँछ भने त्यो सबै मेडिकल माल प्राक्टिस्सँग जोडिन्छ । किनकि, उसको उद्देश्य पैसा कमाउने हुन्छ ।
विश्वका १५ प्रतिशत सुत्केरी महिला जोखिममा र ८५ प्रतिशत महिला सामान्य हुन्छन् । त्यसमा पनि केही प्रतिशतलाई मात्रै सिजेरियन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको अस्पतालको सिजेरियन संख्या अत्यन्त धेरै छ । अस्पतालले बिरामीलाई रिस्क धेरै देखाइदिएपछि सुरक्षित भनेर सिजेरियन गराइदिन्छ । जबकि कतिपय केसमा सिजेरियन गर्नै पर्दैन । किन यस्तो गर्छ भन्दा सिजेरियन गर्दा अस्पतालमा धेरै बिल उठ्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृति कम गर्न राज्यले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसीको अवस्था सबैलाई थाहा छ । राज्यले नियमन र अनुगमन राम्रो गरेको भए यो अवस्था रहने थिएन । अस्पतालको छतबाट हाम फाल्ने, अस्पतालमा बिरामी छाडेर भाग्नेसम्मका घटना हाम्रै समाजका हुन् ।
स्वास्थ्य प्रणालीले धुतेकै कारण दीर्घरोगीहरू उपचार गर्न नगएको अवस्था छ । उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटना बेला-बेलामा आइरहन्छन् । मैले रोल्पामा गएर एउटा अनुसन्धान गरेको थिएँ, त्यहाँका धेरैजसो आत्महत्याको सम्बन्ध ‘मेडिकल लोन’सँग जोडिएको थियो ।
हाम्रो स्वास्थ्य नीति नै बिरामी छ । अहिलेको मिक्स मोडललाई ध्वस्त नपारिकन स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन
यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै तथ्य बाहिर आउँछन् । हेर्दा पो आत्महत्या त तर त्यसको पछाडि त स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच नपुग्नुले हो नि ! स्वास्थ्य बजारमा किन्नुपर्ने वस्तु हो कि जनताको अधिकार ?
संविधानमा मात्र स्वास्थ्य जनताको अधिकार हो तर यथार्थमा त स्वास्थ्य व्यवसाय हो नि ! स्वास्थ्यमा वर्गीय असमानता किन छ भने शुल्क तिर्न सक्नेले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर उपचार गर्छ, नसक्ने घर अगाडिको हेल्थपोस्टमा गएर पनि सेवा लिन सक्दैन ।
कुनै पनि नमूना स्वास्थ्य प्रणाली पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ । नमूना स्वास्थ्य प्रणालीमा जति जति तल गयो त्यति त्यति जनताको सम्पर्क बिन्दुमा पुग्नुपर्छ । किनकि अस्पताल भनेको ‘क्युरेटिभ’ मात्र हो यसले ‘प्रमोटिभ’ र ‘प्रिभेन्सन’ मा काम गर्दैन ।
पब्लिक हेल्थको एउटा पार्टमा ‘प्रमोटिभ’ पर्छ । यो भनेको स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति सही सूचना, विज्ञापन र सचेतनाको पाटो फैलाउनको लागि लगानी गर्ने हुन्छ । यसो गर्दा मानिस रोग लाग्न नदिने कुरामा सचेत हुन्छन् । सुस्वास्थ्यको लागि सही सूचना र ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ ।
पब्लिक हेल्थको अर्को पार्ट ‘प्रिभेन्सन’ हो । यो भनेको रोग लाग्न नदिन रोकथाम गर्ने, खानेपानी र सरसफाइमा ध्यान दिने, भ्याक्सिनहरू लगाउने हो । यस्ता क्रियाकलापले रोग लाग्न सक्ने सम्भावित खतरालाई जोगाउँछ । त्यसैगरी ‘क्युरेटिभ’ अन्तर्गत रोग लागिसकेपछि जतिसक्दो चाँडो सही उपचार गर्ने हो ।
जनस्वास्थ्यको सिद्धान्त अनुसार प्रमोटिभ र प्रिमेटिभमा १ रुपैयाँ खर्च गरेको पैसाले क्युरेटिभको ९९ रुपैयाँ बचाउँछ । स्वास्थ्य व्यवस्थामा भार कम गर्न त प्रमोटिभ र क्युरेटिभमा लगानी गर्नुपर्‍यो नि !
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली एन्टी पिरामिड छ । शहरमा महँगा र कथित सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् भने जति जति ग्रामीण भेगमा गयो त्यति स्वास्थ्यमा पहुँच र सुविधा छैन । हामीलाई समतामूलक स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ । जुन क्षेत्र पहिले नै पीडित छ त्यहाँ धेरै प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।
हामीले जुन क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समतामूलक ढंगले सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सकेका छैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य नीति नै बिरामी छ । राज्यले कर्णाली या अन्य पिछडिएका क्षेत्रका बारेमा केही विशेष प्याकेज ल्याउन सकेको छ त ? अहिलेको मिक्स मोडललाई ध्वस्त नपारिकन स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन ।
नेपालमा पब्लिक हेल्थको अभ्यास भन्दा पनि बायोमेडिकलको अभ्यास भएको छ । राज्यको पनि ठूला ठूला भवन र उपकरण भित्र्याउने र ठूला अस्पताल बनाउने कुरामा मात्र चासो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न भन्दा पनि ठूला शहरमा ठूला अस्पताल खोल्ने ट्रेण्डले कमिशनको लागि काम भइरहेको देखिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्यमा ध्यान नदिइकन नै एकदम ठूला अस्पताल बनाउन चासो राख्नुलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने कदम भनेर बुझ्न सकिन्न ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा ‘डिले इन सिकिङ केयर’, ‘डिले इन रिचिङ केयर’ र ‘डिले इन गेटिङ केयर’ (थ्री-डी) समस्या छ । हाम्रोमा रोग लागेपछि स्वास्थ्य उपचार खोज्ने काम नै ढिलो हुन्छ । यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक कारण जोडिएका हुन्छन् ।
धामीझाँक्री र लोकल मेडिकल पसलेले अलमल्याएका कारण बिरामी रोगको अवस्था बिग्रेपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् । अस्पताल पुगेपछि पनि त्यहाँ अनेक समस्या हुन्छन् । प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी नै नभएपछि उपचार नै पाउँदैनन् । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको डरलाग्दो यथार्थ हो, यो ।
त्यसैगरी पुनस्र्थापनाको कुरा त हाम्रोमा छँदै छैन । बिरामी निको भएर घर गएपछि काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पाटोमा हामीकहाँ ठूलो क्राइसिस छ । यी सबै पाटोहरूमा सन्तुलित रूपमा विकास भएको खण्डमा मात्रै स्वास्थ्यमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ ।
हाम्रोमा स्वास्थ्य भनेकै मेडिकल मात्रै बुझिन्छ । मेडिकलमा पनि डाक्टरले मात्रै गर्ने काम बुझिन्छ अर्थात् बायोमेडिकल । बायोमेडिकलमा पनि हाइपर फर्मास्युटिकलाइजेसन भएको छ । महामारीकै बेलामा पनि महामारी नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि परीक्षणतिर मात्रै जोड दिइयो । घरघरमा भएको ‘साइकोलोजी क्राइसिस’ व्यवस्थापन गर्न ध्यान कसैलाई भएन ।
हामीले स्वास्थ्य प्रणालीको व्याख्या गर्न बृहत् पक्षबाट हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा पब्लिक हेल्थ एकेडेमी एकदमै स्याचुरेट छ । त्यहाँबाट क्रिटिकल मास नै निस्किंदैन । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा सर्वसुलभ, समानता र न्याय छैन । यसले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य नीतिको क्रिटिक विश्लेषण गर्नेहरू नै एकदमै कम निस्किन्छन् ।
अधिकांश यहाँबाट प्रमाणपत्र लिएर जागीर खाने सोच भएका मात्र निस्किन्छन् । उनीहरूलाई देशको स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नै छैन ।
उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउने भनेको अहिलेका शिक्षकहरू हुन् । अलिकति क्रिटिकल हुनेबित्तिकै मानिसलाई रोक्ने र सिस्टममा छिर्न नदिने खेल शुरू हुन्छ ।
विद्यार्थी क्रिटिकल भए पो दुई-चार जना ब्युरोक्रेसीमा छिर्ला, दुई-चार जनाले अनुसन्धान गर्ला, दुई-चार जनाले राजनीति गर्ला अनि पो त एउटा ठूलो जमातले परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । परिवर्तनको लागि बहस शुरू हुन्छ ।
यथास्थितिले हामीलाई कहीं पुर्‍याएको छैन है, यो व्यवस्था जनतामारा छ भनेर कसले प्रश्न गर्ने ? आलोचनात्मक चेत भएको जनशक्ति खै ? एकजना मानिस मात्रै आलोचक भएर परिवर्तन कसरी हुन्छ ?
आज राजनीति गर्ने मानिसहरू कति जना छन्, जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ? धेरै नेताले निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरेका छन्, जसको कारण उनीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त गर्न लागिपरेका छन् । सरकारी संस्था राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने राजनीतिज्ञहरू औंलामा गन्दा पनि नअटाउने छन् । सोही कारण स्वास्थ्य सेवा लिन जनतालाई भार परिरहेको छ ।
हामीकहाँ जो पीडित छ त्यसैलाई दोष लगाउने परिपाटी छ । स्वास्थ्य प्रणालीको हकमा पनि जनता पीडित हुन्, उनीहरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।
त्यसैगरी मिडिया जति आलोचनात्मक हुनुपर्ने हो त्यति भएको देख्दिनँ । स्वास्थ्य स्रोतको असमान वितरण भएको छ, पावर प्राक्टिस्ले गर्दा जनताको जीवन धरासायी छ, जनता असमानता र अन्यायको भुमरीमा पिल्सिएका छन् भन्ने कुरा कसले उठाउने ? यस्तो विषयमा मिडिया पनि क्रिटिकल भएन । धरातलीय यथार्थ बुझेर विश्लेषण गर्ने कोही भएनन् ।
चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध अहिले तनावपूर्ण छ । चिकित्सकहरूलाई अविश्वास गर्ने जमात बढेको छ । स्वास्थ्य भनेको अधिकार नभएर व्यापार भएपछि तनाव सिर्जना हुन्छ । जबसम्म स्वास्थ्यमा राज्य लोककल्याणकारी हुँदैन तबसम्म यस्ता द्वन्द्व भइरहन्छन् । व्यक्तिको आˆनो आम्दानी भन्दा बढी खर्च स्वास्थ्यमा हुने भएकाले पनि यस्ता तनावका घटना भइरहन्छन् । सिस्टमप्रतिको आक्रोशको कारण चिकित्सकहरू कुटिइएका छन् ।
महँगो शुल्क, माल प्राक्टिस् लगायतका कुराले मानिसलाई आक्रोशित तुल्याउँछ । मेडिकल बिल तिर्न नसकेर सुसाइड गरेको, मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको या उपचार गर्दा ऋण लागेको हाम्रो समाजको साझा समस्या हो । आम्दानी जहाँको त्यहीं हुने तर सबैतिरको महँगी आकाशिएकाले मानिसले मर्नुको विकल्प देख्दैन ।
एउटा मानिस दुर्गमबाट भारत या अन्य देशमा कामको लागि जान्छ । बल्लतल्ल अलिअलि पैसा कमाउँछ तर रोग लागेर उपचार गर्न खोज्दा उसले कमाएको पैसाले छेउ पनि पुग्दैन । हाम्रो आजको ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाले मानिसलाई उपचार गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?
हिमाली क्षेत्रको मानिसले ज्यानको माया मारेर यार्सागुम्बा टिप्छ र केही पैसा कमाउँछ । तर बिरामी भयो भने त्यो पैसाले एकछेउ पनि पुग्दैन । किनकि, उसलाई हेलिकप्टरमा हालेर काठमाडौं नल्याइकन बचाउन सकिन्न । उसले यार्सागुम्बा बेचेर कमाएको पैसा मेडिकल क्यापिटलिजममा खर्च हुन्छ ।
उसले ज्यानको जोखिम मोलेर ल्याएको पैसा जीवन रूपान्तरणको लागि खर्च गर्न पाए पो ! शहरमा रहेका महँगा अस्पताल सञ्चालकलाई धनी बनाउन पो एउटा मान्छे यार्सागुम्बा टिप्न जाँदो रहेछ । एउटा मान्छे किन अरब भासिन्छ ? एउटा मान्छे किन घरपरिवार छाडेर भारतमा मजदूरी गर्न विवश हुन्छ ?
मेडिकल बिल स्वास्थ्य प्रणालीको खराब पक्ष चियाउने एउटा झ्याल मात्रै हो । स्वास्थ्य प्रणालीको आमूल परिवर्तन गराउने एजेण्डामा बहस नभएको देख्दा हामी नेपाली वर्षौंसम्म पीडित हुने देख्छु म । स्वास्थ्य राज्यको जनउत्तरदायी किन भएन ? स्वास्थ्य प्रणालीमा मिक्स मोडल भएपछि समस्या त हुन्छ नै ।
देशमा सरकारी मात्र स्वास्थ्य संस्था भएको कल्पना गर्नुस् त । हरेक नागरिक होस् या उच्च ओहोदाका कर्मचारी ! उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ नै त्यही हुन्छ । त्यस्तो भयो भने नेताले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ । जनताले पनि अस्पतालमा केही समस्या या तल-माथि भए प्रश्न गर्छ ।
हरेक क्षेत्र र पेशाका मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ सरकारी मात्र भएपछि त सबैको नजर स्वास्थ्य सुधार्नमा पर्छ । हामीलाई राज्यले एउटा व्यक्तिले चलाएको संस्थामा गएर अधिकार खोज्ने बनाइदियो । खासमा जनताले अधिकार त राज्यसँग खोज्नुपर्ने हो नि !
अहिले हामी बजारसँग प्रश्न गरिरहेका छौं, निजी क्षेत्र बजार हो, बजारमा पैसा तिरे पनि गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न । निजी क्षेत्र माइक्रो जस्तो हो जहाँ १० जना अट्ने ठाउँमा पैसाकै लागि २० जना कोच्छ । माइक्रोसँग झगडा गरेर हाम्रो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? त्यस्तो ठाउँबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कि राज्यसँग प्रश्न गर्ने ?
हामीले कर राज्यलाई तिरेका छौं, हाम्रो करबाट नै सरकारी प्रणाली चलिरहेको छ । राज्यलाई कर तिरेर निजीमा गुणस्तर खोज्दा गुणस्तर सेवा पाइन्न । उल्टो भएभरको पैसा सकिन्छ ।
(चिकित्सा मानवशास्त्री घिमिरेसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
‘प्रहरीले पीडितलाई नै दोषी देख्न छाड्नुपर्छ’
‘समाजले अनुसन्धान अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्छ’
ठूला पार्टीको स्वार्थमा जसपा विभाजन भयो
अर्को ठूलो क्षतिको नजिक
‘नियामक निकाय भ्रष्टाचारका नयाँ ढोका’